By Tachileik News Agency - July 30, 2009
လယ်ယာထဲမှာ နှာဖား​ြကိုး​အထိုး​ခံထား​ရြပီး​ လယ်ထွန်​ေပး​ေနတဲ့​ နွား​တစ်​ေကာင်ရဲ့​ စည်း​စိမ်ဟာ ​ေကာက်ရိုး​ေြခာက်ကို စား​ရတဲ့​ အချိန်ခဏ​ေလး​ဆိုသလို ဘဝမှာလည်း​ ပင်ပန်း​မှု​ေတွကို ပ​ေပျာက်​ေစတာ နွား​တစ်​ေကာင်ရဲ့​ စည်း​စိမ်​ေလာက်​ေတာင်မရှိဘူး​....
စကား​အသံုး​အနှုန်း​ြကမ်း​တမ်း​သွား​မယ်ဆိုရင် ဝန္ဒာမိပါ။ လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ မ​ေလာက်မငှ ဘဝြကီး​ကို အဲ့​လိုပဲ ပမာနှိုင်း​ရပါလိမ့်​မယ်..။
ြပည်တွင်း​မှာ Domain နဲ့​ Hosting ရနိုင်ြပီ
By Tachileik News Agency - July 29, 2009
“““အဟမ်း​..ဟမ်း​... Online ​ေပါ်မှာ blog ​ေလး​များ​ြပုလုပ်ထား​ ဒိုမိန်း​ေလး​များ​ ဝယ်ကာဆင်လိုက်မှ
စို​ေြပသွား​မယ် လာထား​ ”””
ရထား​ေပါ်မှာ လျက်ဆား​ေရာင်း​သလိုပါပဲ ​ေြကာ်ြငာ​ေလး​နည်း​နည်း​ဝင်ြကည့်​တာပါ...။ ဒီလိုပါ Web Hosting ​ေတွ Domain ​ေတွ Premium Account ​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်လာရင် ြပည်ပမှာက လွယ်ကူပါတယ် မလွယ်ကူ တာက​ေတာ့​ ြပည်တွင်း​ ြမန်မာနိုင်ငံတွင်း​မှာ​ေပါ့​ဗျာ...။ ဒါ​ေပမဲ့​ အခု​ေတာ့​ အဲ့​ဒီလို​ေတွကို ဝန်​ေဆာင်မှု​ေပး​တာ​ေတွများ​လာပါြပီ၊​ အဲ့​ဒီထဲမှာပါ ကျ​ေနာ့်​ရဲ့​ ညီလိုလည်း​ြဖစ် သူငယ်ချင်း​လိုလည်း​ြဖစ်တဲ့​ WebHostMM မှ ညီငယ်က ဝန်​ေဆာင်မှု အြပည့်​အဝ ​ေပး​ေနပါြပီ...... ဘာ​ေတွကို ဘယ်လိုဝန်​ေဆာင်မှု​ေပး​လည်း​ဆိုရင် ​ေအာက်ပါ Link အတိုင်း​ြကည့်​နိုင်ပါတယ်
www.webhostmm.net အနည်း​အကျဉ်း​ကို​ေတာ့​ ​ေအာက်မှာ ​ေဖာ်ြပ​ေပး​ထား​ပါတယ်
.com .net .org .info .bizအစရှိတဲ့​ ဒိုမိန်း​များ​ကို တစ်နှစ် လျှင် ၁၅ဝဝဝကျပ်နှုန်း​ ြဖင့်​
Web Host Myanmar တွင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဝယ်ယူရမှာ ထူး​ြခား​ေသာ ဝန်​ေဆာင်မှုက​ေတာ့​ Domain တစ်ခု ဝယ်ယူသူတိုင်း​ကို
Domain Control Panel ​ေပး​ပါတယ် များ​ေသာအား​ြဖင့်​ေတာ့​ တစ်ြခား…
By Tachileik News Agency - July 28, 2009
ငယ်စဉ်တုန်း​က က​ေလး​သဘာဝမို့​ အပူအပင်ကင်း​မဲ့​ခဲ့​တာ အြပစ်လို့​မဆိုနိုင်သလို၊​ အခက်အခဲ​ေတွကို နား​မလည်ပဲ လိုချင်တာကို ပူဆာတတ်တာလည်း​ အြပစ်လို့​ မဆိုနိုင်ဘူး​ေလ က​ေလး​ဆို​ေတာ့​ လူြကီး​တစ်​ေယာက်ရဲ့​ ဆင်း​ရဲဒုက္ခ​ေတွ နား​မလည်​ေသး​ဘူး​ေပါ့​။ အ​ေဖက ​ေနပူြကီး​ထဲမှာ ​ေြမတူး​ေနမလား​၊​ ြမက်ရိတ်​ေနမလား​(နွား​စာအတွက် ​ေန့​စား​အလုပ်)၊​ ဆိုက်က္ကား​နင်း​ေနမလား​ ကူလီထမ်း​ေနမလား​ဆိုတာ သား​သမီး​တစ်​ေယာက်အ​ေနနဲ့​ ငယ်ရွယ်​ေသး​တဲ့​အချိန်ြဖစ်​ေန​ေတာ့​ မသိနိုင်သလို၊​ အ​ေမက အဝတ်​ေလျှာ်တဲ့​အလုပ် လုပ်​ေနမလား​၊​ သူများ​အိမ်မှာ ​ေအာက်ကျို့​စွာလုပ်​ေနရမလား​၊​ ​ေနပူထဲမှာ အ​ေဖနဲ့​ အလုပ်လိုက်လုပ်​ေနမလား​၊​ ရာသီစံုထွက်တဲ့​ သီး​နှံ​ေတွကို ဘန်း​ထဲထည့်​လို့​ ​ေခါင်း​ေပါ်ရွက်ကာ လည်​ေရာင်း​ေနမလား​ ဆိုတာကို နား​မလည်နိုင်ခဲ့​ မသိခဲ့​တဲ့​ အချိန်​ေတွဟာ က​ေလး​တစ်​ေယာက်ရဲ့​ ပူဆာတတ်တဲ့​ အရွယ်​ေလး​ေတွမှာပါ...။ ​ေနာက်သိပ်မထူး​မရှား​ရှိတာတစ်ခုကလည်း​ လူပျို၊​ အပျိုအရွယ်​ေတွ၊​ အိမ်​ေထာင်မြပုမိအရွယ်​ေတွလည်း​ က​ေလး​ငယ်​ေတွလို မိဘအ​ေပါ်မသိမနား​လည်တတ်​ေတာ့​ သူတို့​ကို ဘဝအ​ေြကာင်း​ မိသား​စုအ​ေြကာင်း​ နား​မလည်မသိမရှိဘူး​လို့​ ​ေဝဖန်ရမလား​…
By Tachileik News Agency - July 27, 2009
​ေနွ​ေခါင်​ေခါင်မှာ အလွန်ပူြပင်း​မှုဒဏ်ဟာ လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ “​ေဒါသ” နဲ့​ တူလှပါတယ်၊​ ​ေနမင်း​ြကီး​ဟာ စဉ်း​စား​ဉာဏ်မရှိသ​ေလာက် ပူ​ေနသလို လူဟာလည်း​ စဉ်း​စား​ဉာဏ်မရှိသလို ​ေဒါသ ထွက်​ေနတတ်ပါတယ်...။ ​ေကာင်း​ကင်ယံက လျပ်စီး​လက်သလိုပဲ ခဏ​ေလး​အတွင်း​မှာ ​ေဒါသရဲ့​ ချယ်သမှုက အား​နွဲ့​တဲ့​ အရာ​ေတွ ြပိုလှဲပျက်စီး​ြကရတယ်..။ အဲ့​ဒါဟာ နှူး​ညံ့​တဲ့​ စိတ်တစ်ခုပါ..။ ဆံုး​ရှံုး​လိုက်ရတဲ့​ စက္ကန့်​တိုင်း​ကို ​ေဒါသက ဝါး​မျိုသွား​တယ်ဆိုတာ မသိတာ​ေပမဲ့​ ခဏြက​ေတာ့​ ​ေသဆံုး​သွား​တဲ့​ ​ေဒါသရဲ့​ေနာက်မှာ ကပ်ပါလာတာက​ေတာ့​ နှ​ေမျှာတမ်း​တြခင်း​ပါ...။ ​ေြကာက်မတ်စရာအလွန်​ေကာင်း​တဲ့​ ဘီလူး​ေတွထက် ​ေြကာက်စရာ​ေကာင်း​တာက​ေတာ့​ လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ ​ေဒါသ.............
By Tachileik News Agency - July 25, 2009
တစ်​ေန့​မှာလူတစ်​ေယာက် ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ စကား​ေတွ ​ေဖာင်ဖွဲ့​ေြပာလိုက်တယ် တစ်ဖက်လူကို​ေပါ့​ ​ေြပာတယ်ဆိုတာကလည်း​ သူများ​ရဲ့​ ​ေကာင်း​တာ​ေရာ မ​ေကာင်း​တာ​ေရာ​ေပါ့​ေလ သို့​ေပမဲ့​ ​ေြပာသူမှာလည်း​ ဘာအကျိူး​မှ မရသလို နား​ေထာင်သူမှာလည်း​ ြမန်မာစကား​ပံုအရ​ေြပာရရင် “water follow fish follow”“​ေရလိုက် ငါး​လိုက်” ဆိုသလို​ေပါ့​ အင်း​..အင်း​ နဲ့​ ​ေခါင်း​တစ်ညိတ်ညိတ်နဲ့​ေပါ့​ေလ...။ စကား​တစ်ခုရှိပါတယ် ​ေပျာ်​ေစ ပျက်​ေစတဲ့​ ​ေပျာ်​ေစက​ေတာ့​ ​ေပျာ်စရာအြဖစ်​ေပါ့​ ပျက်​ေစက​ေတာ့​ အနိစ္စသ​ေဘာနဲ့​ ကိစ္စ​ေလျှာ​ေအာင် ရည်ညွန်း​သလို ြဖစ်​ေနတတ်ပါတယ်။ စကား​ေြပာတဲ့​အခါ ​ေြပာအပ်သလား​၊​ မ​ေြပာအပ်ဘူး​လား​၊​ အ​ေပျာ်​ေြပာတာလား​ ဆိုတာကို စဉ်း​စား​သင့်​ရပါတယ်။ စကား​မ​ေြပာတတ်တဲ့​အခါ ြမန်မာ စကား​ပံုထဲကလို စကား​အသံုး​ခံရသူအ​ေနနဲ့​က “ဆင်က​ေတာ့​ ဘုမသိ ဘမသိ နဲ့​ ကျင်ငယ်ရည်စွန့်​လိုက်တာ ပုရွတ်ဆိတ်မှာ​ေတာ့​ ပင်လယ်​ေဝသွား​တယ်” ဆိုသလိုြဖစ်​ေနတတ်ပါတယ်..။ ​ေသချာသံုး​သပ် ​ေြပာဆိုြကည့်​မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ြမန်မာစကား​ဟာ အြကွယ်ဝဆံုး​ပါ...။ သံုး​တတ်ရင် အလွန်တန်ဖိုး​ရှိသလို မသံုး​တတ်ရင် ကိုယ့်​ေသတွင်း​ကိုယ်တူး​သလို ြဖစ်တတ်တာက​ေတာ့​ စကား…
By Tachileik News Agency - July 24, 2009
“သူငယ်ချင်း​ မင်း​ အိမ်​ေထာင်မြပု ​ေသး​ဘူး​လား​ကွ?”
“ငါအိမ်​ေထာင်မြပူ​ေတာ့​ပါဘူး​ကွာ... ငါအိမ်​ေထာင်ြပုလိုက်ရင် မင်း​သိတဲ့​အတိုင်း​ပဲ ငါ့​မှာ မိသား​စုနဲ့​ (မိဘ၊​ေမာင်နှမ)၊​ ြပီး​ေတာ့​ ငါက မိသား​စုကို ြကည့်​ေနရ​ေသး​တယ်​ေလ ​ေြပာရရင် မိသား​စုမှာ ငါမရှိရင် မြဖစ်ဘူး​ကွာ...”
“ အင်း​.... ဟုတ်​ေတာ့​ဟုတ်ပါတယ် မိသား​စုအ​ေပါ်သိတတ်၊​ နား​လည်တတ်၊​ ရပ်တည်​ေပး​တတ်တာ အ​ေကာင်း​ဆံုး​ပါပဲကွာ...၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ အချိန်ဆိုတာ အြမဲတမ်း​ေြပာင်း​လည်း​လာတယ်ကွ၊​ မင်း​ကို ငါက မိသား​စုအ​ေပါ် မသိတတ်ဖို့​ မရပ်တည်​ေပး​ဖို့​ ​ေြပာတာမဟုတ်ဘူး​ေနာ်၊​ မိသား​စုအ​ေပါ် သိတတ်ဖို့​ကိုအား​ေပး​ပါတယ် မိဘ ​ေသရင် မိဘအစား​မရဘူး​ မိန်း​မ​ေသရင် မိန်း​မ အစား​ရတယ် ​ေယာကင်္ျား​ေသရင် ​ေယာကင်္ျား​အစား​ရယ် ဒါ​ေပမဲ့​ မင်း​ရဲ့​ စိတ်ထဲမှာ အုတ်ြမစ်ချထား​တဲ့​ အစွဲတစ်ခု ကို ​ေြပာြပချင်...”
“ဒီလိုပါ မင်း​ခဏက ​ေြပာလိုက်တဲ့​ စကား​ေတွထဲမှာ မင်း​ရဲ့​အစွဲက “မိသား​စုမှာ ငါမရှိရင် မြဖစ်ဘူး​”ဆိုတာက သိပ်သဘာဝ မကျဘူး​လား​လို့​...”
“ဘယ်လို သ​ေဘာဝ မကျတာလည်း​ သူငယ်ချင်း​ရ ငါသိပ်နား​မရှင်း​ဘူး​”
“ငါစကား​ေြပာတာ ​ေလာသွား​တယ်ကွာ ငါ့​စကား​က ဗမာမြပ…
By Tachileik News Agency - July 23, 2009
​ေကာင်း​ကင်​ေပါ်က လတစ်စင်း​ဟာ ​ေရြကည်တုန်း​ေတာ့​ ​ေရြပင်​ေပါ်မှာ ြကည်ြကည်လင်လင် ထင်း​ထင်း​ရှင်း​ရှင်း​ ြမင်​ေတွ့​ရနိုင်​ေပမဲ့​ ​ေလ​ေြပ​ေလး​ေတွ လှိုင်း​ထန်သွား​တဲ့​အခါ ​ေရြပင်ဟာ တွန့်​လိမ်သွား​ခဲ့​တဲ့​ေနာက် လမင်း​ရဲ့​ဘဝဟာ ​ေရြပင်​ေပါ်မှာ ​ေကာင်း​စွာပံုရိပ်မထင်နိုင်​ေတာ့​ဘူး​ေလ.... ဒါကို ​ေလာကြကီး​ရဲ့​ နိယာမတစ်ခုအြဖစ်​ေတွး​ြကည့်​ရင် တစ်​ေထာင့်​တစ်ညပံုြပင်လို အဓိပ္ပါယ်အမျိုး​မျိုး​ဖွင့်​လို့​ရပါ၏။
အတိတ်က ြဖစ်တည်မှု​ေတွကို ြပန်လိုချင်မိ​ေပမဲ့​ အရာရာတိုင်း​ဟာ အတိတ်ကလို ြဖစ်မလာနိုင်​ေတာ့​ဘူး​ဆိုတာရယ်၊​ မြဖစ်နိုင်​ေတာ့​ဘူး​ဆိုတာရယ်ကို သိလိုက်ရတဲ့​ေနာက် ပစ္စုပ္ပန်မှာ အတိတ်ကြဖစ်ပျက်ခဲ့​တာ​ေတွထက် အ​ေတာက်ပဆံုး​ြဖစ်​ေအာင် ​ေနထိုင်သွား​နိုင်မယ်ဆိုရင် ဘဝဟာ လိုချင်တတ်မတ်မှု​ေသွး​​ေတွ မြကွလာနိုင်​ေတာဘူး​ဆိုတာ ​ေသချာပါ၏။
ဘတ်စ်ကား​​ေပါ်က ြကမ်း​တမ်း​တဲ့​ စပါယ်ယာလည်း​ မိသား​စုအတွက် ကိုယ်နှုတ်ြကမ်း​တမ်း​စွာ အလုပ်​ေနရတယ်၊​ လမိုက်ညရဲ့​ သန်း​ေခါင်ယံချိန်မှာ ခိုး​ဝှက်တဲ့​ သူခိုး​လည်း​ မိသား​စုအတွက် ခိုး​ဝှက်ရတယ်၊​ ​ေဈး​ထဲက ငါး​စိမ်း​သည်မ ကလည်း​ မိသား​စုအတွက် ငါး​ေခါင်း​ကိုထုကာ သတ်​ေရာင်း​ေနရတယ်၊​ အမှိုက်ပံုမှာ …
By Tachileik News Agency - July 21, 2009
အ​ေဖကျ​ေနာ် ဟို​ေကာင်ကို ြကည့်​ရတာ ​ေဒါက်မကျိုး​ဘူး​ဗျာ... တစ်​ေလာကလံုး​ သူ့​လုပ်စာ ထိုင်စား​ေနတာ ြက​ေနတာပဲ မျက်နှာြကီး​က ရိုက်​ေပါက်ပဲ....
စိတ်ထိန်း​ပါသား​ရယ်.. သား​နား​လည်​ေအာင် အ​ေဖရှင်း​ြပမယ်၊​ သူတို့​ေတွက ငယ်ငယ်​ေလး​ကတည်း​က မိဘပိုက်ဆံကို သံုး​ြပီး​ ြကီး​လာခဲ့​ြကတာ၊​ အဲ့​ဒီလို ​ေနလာတာြကာလာ​ေတာ့​ ဂုဏ်​ေမာက်လာတယ် တစ်​ေလာကလံုး​ကို လူမထင်တတ်ြက​ေတာ့​ဘူး​...။ ​ေနာက်တစ်နည်း​ေြပာရရင် ​ေလာကြကီး​အ​ေြကာင်း​ လူအ​ေြကာင်း​ကို မသိဘူး​၊​ ဘဝအ​ေြကာင့်​ကို သူတို့​ေကာင်း​ေကာင်း​နား​မလည်ဘူး​။ ပိုက်ဆံကို ​ေဖာ​ေဖာသီသီသံုး​နိုင်​ေတာ့​ သူတို့​ရဲ့​ ဘဝင်(ဘဝြမင့်​ြခင်း​) မှာ ကိုယ့်​ပိုက်ဆံကိုယ်သံုး​တာ ဘယ်သူ့​ကို ဂရုစိုက်စရာလိုလည်း​ ဆိုတဲ့​သ​ေဘာ​ေပါ့​ ငါ့​သား​ရဲ့​။
သူတို့​နဲ့​နှိုင်း​ယှဉ်ြကည့်​ သား​နဲ့​ ငါ့​သား​က ငယ်ငယ်​ေလး​ကတည်း​က အလုပ်​ေတွလုပ်လာတယ် မိဘနား​ကို လူမှန်း​သိတတ်စကတည်း​ လက်ြဖန့်​မ​ေတာင်း​ဘူး​ ။ အလုပ်​ေတွလုပ်ြပီး​ မိဘကို​ေပး​တယ် လိမ္မာ​ေရး​ြခား​ ရှိတယ်။ ငါ့​သား​က ပိုက်ဆံကို ​ေချွး​နဲ့​ရင်း​ြပီး​ ရှာခဲ့​ရတာဆို​ေတာ့​ လူ့​သ​ေဘာ လူ့​မ​ေနာ ကို ​ေကာင်း​ေကာင်း​ နား​လည်တယ်။ အဲ့​ဒါ​ေ…
၆၂ နှစ်​ေြမှာက် အာဇာနည်​ေန့​
By Tachileik News Agency - July 18, 2009
အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ြမတ်များ​အား​ အ​ေလး​ြပုပါသည်Copy ကူး​ယူရန်----<img src="http://img338.imageshack.us/img338/2127/myanmar.jpg"/>
ြပီး​ဆံုး​ခဲ့​ေပမဲ့​လည်း​ ဒီပန်း​ချီကား​ေလး​ဟာ အ​ေရာင်​ေတာက်ပ​ေနဆဲပါ... ဘယ်​ေတာ့​မှ ​ေမ့​လို့​မရ​ေသာ ပံုရိပ်​ေတွက ထွန်း​လင်း​ေတာက်ပ​ေနတယ်...။ ရဲရင့်​မှု​ေတွ၊​စွန့်​လွတ် အနစ်နာခံမှု​ေတွ၊​​ေအာင်ြမင်​ေကျာ်ြကား​မှု​ေတွဟာ ဒီပန်း​ချီကား​ေလး​ထဲမှာ အြမဲတမ်း​ပံုရိပ်ထင်​ေနအံုး​မှာပါပဲ...။ မနက်ြဖန်များ​စွာရဲ့​ လှပ​ေသာ​ေန့​ေတွကို စွန့်​လွတ်အနစ်နာခံစွာ လမ်း​ြပ​ေပး​ခဲ့​ေသာ အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ြမတ်များ​အား​ ကျွနိုပ်ဦး​ညွတ်ပါ၏။
By Tachileik News Agency - July 17, 2009
​ေမ​ေမ​ေကာင်း​ကင်​ေပါ်က လမင်း​ြကီး​က ဘာြဖစ်လို့​ တစ်ခုတည်း​ြဖစ်​ေနတာလည်း​ဟင်..။ သူ့​ကို ြကည့်​ြပီး​ သား​ပျင်း​လိုက်တာ...။ ြပီး​ေတာ့​ အထီး​ကျန်ဆန်​ေနသလိုပဲ​ေနာ်... ြကယ်​ေလး​ေတွဆိုရင် အစုအ​ေဝး​ေတွနဲ့​ ​ေပျာ်​ေနြကမဲ့​ပံုပဲ...။ လမင်း​ြကီး​က​ေတာ့​ သနား​စရာပဲ​ေနာ်...။
သား​က လမင်း​ြကီး​ကို သနား​ေနတာလား​... လမင်း​ြကီး​က သူမ​ေပျာ်ရရင်​ေနပါ​ေစ သူနဲ့​ပတ်သက်တဲ့​သူ​ေတွ ​ေပျာ်​ေနတာကို ြကည့်​ြပီး​ ပီတိြဖစ်​ေနရတာ သား​ရဲ့​....။ သား​လည်း​ လမင်း​ြကီး​လို တစ်​ေန့​ြဖစ်လာတဲ့​အခါ နား​လည်လာပါလိမ့်​မယ် အထီး​ကျန်ဆန်တယ်ဆို​ေပမဲ့​ ပံု​ေသသတ်မှတ်ချက် မရှိဘူး​ေပါ့​သား​ရယ်..။ ဒါ​ေပမဲ့​ သူလည်း​ တစ်ခါတစ်​ေလမှာ တစ်ကိုယ်ရည်တည်း​ ​ေနရတာ ပျင်း​ရိလာတတ်​ေပမဲ့​ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့​ အတိုင်း​အတာ​ေတွက သူ့​မှာရှိ​ေနတဲ့​အခါ ဒီလိုပဲ တစ်ကိုယ်ရည်တည်း​ေနရတာ​ေပါ့​...။ ဒီလိုပဲ သား​ရဲ့​ ဘဝမှာ ြပီး​ြပည့်​စံုမှုမရှိတဲ့​အခါ စိတ်အား​ငယ်တတ်တယ် သိပ်ငယ်တတ်တယ် ဆိုတာ ကိုယ့်​ထက်သာတဲ့​လူ​ေတွကို ြကည့်​ြပီး​ အား​ကျလို့​ အဲ့​ဒီလို စိတ်မျိုး​ြဖစ်တတ်တာပါ...။ ကိုယ်ထက်သာတဲ့​လူ​ေတွကို အား​မကျရင် စိတ်​ေရာဂါ ြဖစ်စရာမရှိဘူး​ေပါ့​ကွယ်...။ ဘဝမှာ​…
By Tachileik News Agency - July 16, 2009
အူး​.........အူး​..............အု! ​ေခွး​ေတာင် ​ေကာင်း​ေကာင်း​မအူနိုင်တဲ့​ ဒီလိုလမိုက်ည ဘယ်သူကများ​ လက်သရမ်း​လို့​ ​ေကာင်း​ကင်ကို မီး​လံုး​ေတွချိတ်ဆွဲ မဲ​ေမှာင်​ေန​ေအာင် အ​ေရာင်ချယ်ခဲ့​လည်း​မသိ။ ဖဲဝိုင်း​က အိမ်အြပန် ဖိနပ်တစ်ရံ​ေပျာက်ခဲ့​တယ်...။ ​ေသချာတယ် ​ေစာရမင်း​သား​ြကီး​ ငတက်ြပား​ အလစ်သုတ်သွား​တာ ြဖစ်နိုင်တယ်..။ သန်း​ေခါင်ယံလမိုက်ညမှာ ပုဆိုး​စလွယ်သိုင်း​နဲ့​သူရဲ​ေကာင်း​ ငါ...ငါ ကိုင်တုတ် ြကွား​လံုး​ထုတ်​ေသာ်လည်း​ ​ေနာက်ဆံုး​လက်ကျန် လမ်း​ေဘး​၌သာ ပက်လက်လန်၏.......
​ေညာင်အိုပင် နှင့်​ ​ေရအိုး​စင်
​ေနမင်း​ြကီး​ဟာ ညင်သာသ​ေယာင်နဲ့​ ပူ​ေလာင်​ေသာဒဏ်ြဖင့်​ လူအများ​ကို လှည့်​စား​ရက်​ေလသည်။ တစ်​ေန့​၌ ခရီး​သွား​တစ်​ေယာက်သည် ​ေနွရာသီရဲ့​ ပူ​ေလာင်အိုက်စပ်မှုဒဏ်ကို ခဏသာ​ေြဖ​ေဖျာက်​ေစဖို့​ ခရီး​တစ်​ေထာက်အြဖစ် ခိုနား​ဖို့​ရာ ​ေနရာရှာလိုက်တဲ့​အခါမှာ ြကီး​မား​တည်တံ့​ြပီး​ အရိပ်အာဝါသ​ေကာင်း​မွန်​ေသာ ​ေညာင်အိုပင်ြကီး​ကို ​ေတွ့​လိုက်ရချိန် ထို ခရီး​သွား​ဧည့်​သည်မှာ အား​ရဝမ်း​သာစွာြဖင့်​ ​ေညာင်ပင်ြကီး​ေအာက်၌ ရှိ​ေသာ ​ေရအိုး​စင် နား​သို့​ကပ်ကာ ​ေရတစ်ခွက်ကို ခပ်၍ ​ေမာ့​ချလိုက်ြပီး​ ​ေညာင်ပင်​ေြခရင်း​၏ တစ်​ေနရာ၌ သက်သာစွာ အပန်း​ေြဖ​ေနပါသည်...။ ထိုအချိန်၌ ထိုခရီး​သွား​ဧည့်​သည်လို ​ေနာက်ထပ်ခရီး​သွား​ဧည့်​သည်များ​ တစ်​ေယာက်ြပီး​တစ်​ေယာက် ​ေရာက်လာကာ အချင်း​ချင်း​ တစ်​ေယာက်နဲ့​တစ်​ေယာက် မိတ်ဖွဲ့​ြက၊​ ​ေပျာ်ပါး​ြက၊​ ​ေရှး​ေဟာင်း​ေနှာင်း​ြဖစ်​ေြပာြက၊​ စား​ြက​ေသာက်ြကသည်။ မိုး​ရာသီဆိုရင်ြဖင့်​ ခရီး​သွား​များ​မှာ မိုး​ခိုစရာအြဖစ် ​ေညာင်အိုပင်ြကီး​ဆီသို့​ ခိုနား​သလို ​ေနွရာသီဆိုရင်လည်း​ အရိပ်ခိုအပန်း​ေြပြကသည်..။ ခရီး​သွား​များ​မှာ အရိပ်ခိုရံုမဟုတ်ပဲ ​ေညာင်ပင်ြကီး​ရဲ့​ အကိုင်း​အလက်​ေတွကိ…
By Tachileik News Agency - July 14, 2009
ဒီသီချင်း​ေလး​ဟာ.... ခွဲခွာရြခင်း​၊​ လွမ်း​ေမာြခင်း​၊​ ချစ်​ေသာသူနဲ့​ ြပန်မဆံုြဖစ်တဲ့​အခါ ပူ​ေလာင်ရြခင်း​ကို ကိုယ်စား​ြပုထား​တဲ့​ သီချင်း​ေလး​တစ်ပုဒ်ပါ ကျ​ေနာ်ြကိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်...။ Big Bag အဖွဲ့​ထဲက Vနိုထွန်း​ ခံစား​ ​ေရး​စပ်သီဆိုထား​တာ​ေလး​ပါ...
ဒီည ​ေတွဟာ ဒို့​နှစ်​ေယာက်အတွက်
ဒါအမုန်း​မဟုတ်ဘူး​ မင်း​အတွက် ​ေပး​ဆပ်ြခင်း​ပဲ
ငါ့​သွား​မဲ့​လမ်း​ ြကမ်း​တမ်း​ေနမယ် မင်း​နား​လည်ပါ
​ေကာင်း​ကင်က ြကယ်တစ်စင်း​ေြကွကျလာချိန် ​ေြမြပင်​ေပါ်မှာ အရိပ်ထင်ခဲ့​မယ်ဆိုရင် ​ေကာင်မ​ေလး​ေရ.. အလွမ်း​နဲ့​ေရး​တဲ့​ ဒိုင်ယာရီ​ေတွဟာ ရင်ထဲက ထွက်​ေပါ်လာတဲ့​ စကား​လံုး​အတိုင်း​ပါပဲ။ ကိုယ်တို့​နှစ်​ေယာက် ညစဉ်မက်ခဲ့​တဲ့​ အိမ်မက်​ေတွထဲ ​ေကာင်မ​ေလး​က လမင်း​ြကီး​ဆိုရင် ​ေကာင်မ​ေလး​ရဲ့​ေဘး​မှာ ကိုယ်ရံ​ေတာ်အြဖစ် ြကယ်ပွင့်​က​ေလး​ြဖစ်ပါရ​ေစ…..
​ေကာင်​ေလး​။ ။ ​ေပျာ်စရာ​ေတွ မရှိတဲ့​ငါဟာ ​ေကျာက်တံုး​လိုပဲ… ဒါ​ေပမဲ့​ လွမ်း​စရာ​ေတွကို​ေတာ့​ မလိုချင်ဘူး​...
​ေကာင်မ​ေလး​။ ။ ​ေဝး​ေနရလို့​ လွမ်း​တယ်ဆိုတာ မလိုချင်ပဲရတဲ့​ ​ေရာဂါပါ…. ဒါ​ေပမဲ့​
​ေကာင်​ေလး​ကို လွမ်း​ေနသမျှ ချစ်​ေနရလို့​ ​ေပျာ်တယ်…။ ညစဉ် ​ေကာင်​ေလး​ရဲ့​ အသံကိုြကား​တိုင်း​ မခံနိုင်​ေအာင်လွမ်း​မိတယ်…
​ေကာင်​ေလး​။ ။ လွမ်း​စရာ​ေတွရဲ့​ေနာက်မှာ ​ေကာင်မ​ေလး​ရဲ့​ အြပံုး​ေလး​ေတွက အလွမ်း​ကို သက်သာ​ေစတယ်…
​ေကာင်မ​ေလး​။ ။ ​ေကာင်မ​ေလး​ရဲ့​အသက်နဲ့​ထပ်တူ ​ေကာင်​ေလး​ကို တန်ဖိုး​ထား​တယ်ဆိုတာ…..
​ေကာင်​ေလး​။ ။ အတူဆံုချိန်တိုင်း​မှာ ရင်ခုန်သံ​ေတွက ပင်လယ်လိုပဲ လှိုင်း​ထန်တယ်…
​ေကာင်မ​ေလး​။ ။အတူဆံုရင် ဘာမှမသိ​ေတာ့​ဘူး​ အချိန်ကုန်သွား​မှာ ​ေြကာက်မိတယ်.. မ​ေတွ့​ရရင် စဉ်း​စာ…
By Tachileik News Agency - July 12, 2009
နှုတ်ဆက်ြခင်း​ေတွနဲ့​ ​ေဝး​ခဲ့​ြကရတယ်… တစ်လမ်း​လံုး​နှုတ်ဆိတ်စွာနဲ့​ ရင်တွင်း​မှာ ​ေြပာမြပတတ်​ေအာင် ခံစား​ေနရတဲ့​ ​ေဝဒနာ​ေတွဟာ ​ေဝး​ရ​ေတာ့​မယ်ဆိုတဲ့​အသိ​ေြကာင့်​ ြဖစ်​ေပါ်လာြခင်း​ပါ……။
​ေတွ့​ဆံုြခင်း​ေတွမှာ ဘာရယ်မဟုတ်​ေပမဲ့​ ြကာလာ​ေတာ့​လည်း​ အမှတ်တရ​ေတွ သံ​ေယာဇဉ်ြကိုး​ေတွ နဲ့​ ရစ်ပတ်ချည်​ေနှာင်မိတဲ့​အခါ ရင်နစ်​ေအာင် ဝမ်း​နည်း​မှု​ေတွနဲ့​အတူ လွမ်း​ြခင်း​ေတွကို ရရှိခဲ့​တယ်..။ ထိန်း​ချူပ်ထား​လည်း​ပဲ ပွင့်​အန်​ေပါက်ထွက်လာတဲ့​ ဒီမျက်ရည်​ေတွဟာ နှုတ်ဆက်မျက်ရည်ဆိုရင် မှား​မယ်မထင်ပါဘူး​ေလ…။ ဘယ်သူ့​ကို ြပန်ြပီး​ေြပာရမလဲ ရင်နစ်​ေအာင် လွမ်း​တဲ့​အ​ေြကာင်း​ ဘယ်သူ့​ကို ြပန်ြပီး​ေြပာရမလဲ ရင်နစ်​ေအာင်ဝမ်း​နည်း​လို့​ကျလာတဲ့​ မျက်ရည်​ေတွ​ေြကာင်း​…။ တစ်ချိန်က အတူသွား​ အတူလာ စြက​ေနာက်ြက စိတ်ဆိုး​စိတ်​ေကာက်ခဲ့​ြက နဲ့​ ခုနှစ်လွှာက အခန်း​ကျဉ်း​ေလး​ထဲ ​ေပျာ်ရွှင်ခဲ့​ြကတယ်…။ အခု​ေတာ့​ ဒီအခန်း​ကျဉ်း​ေလး​ထဲ တစ်​ေယာက်တည်း​ စိတ်အား​ငယ်စွာ နဲ့​ လွမ်း​ေဆွး​တမ်း​တ​ေနမိတယ်..။ ကန်​ေဘာင် ​ေပါ်က ​ေပျာ်စရာ​ေတွ ဆိပ်ကမ်း​ေပါ်က ​ေပျာ်စရာ​ေတွ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ​ေပျာ်ရွှင်စရာ​ေတွဟာ အခု​ေတာ့​ အမှတ်တရ အြဖစ်ကျန်ခဲ့​တယ်..။ ​ေြပာခဲ့​ဖူ…